Ukuhlanganiswa kwentambo kweBeijing Forestry University eChina
Iphrofayili Yekhasimende I-Beijing Forestry University (BFU, noma i-BJFU) iyunivesithi eseHaidian District, eBeijing egxile emahlathini. Kuyunivesithi yokwabelana ngemvelo yolwazi ngesayensi, ubunjiniyela, imithetho, ubuciko nezilimi emhlabeni. Okudingekayo - Ikhava yokusebenza kwe-WiFi ephezulu ...
Indebe Yomhlaba wonke ye-FIFA U20 2019 ePoland
Iphrofayili Yekhasimende Indebe Yomhlaba Yama-22 ye-FIFA U-20 izobanjelwa emadolobheni ayisithupha ePoland kusuka ngoMeyi 23 kuya kuJuni 15 ngo-2019. Inethiwekhi ye-Intanethi Sc ...
I-DCN isiza iRostelecom ukwakha ukufakwa kwe-WiFi emaphandleni eRussia
Iphrofayili Yekhasimende URostelecom nguyena opharetha omkhulu wezwe waseRussia onenethiwekhi enkulu yomgogodla wasekhaya (cishe ama-500,000 km) eRussia futhi unikeza ukufinyelela "kwamamayela wokugcina" emakhaya ayizigidi ezingama-35 ezweni lonke. Isidingo -Nikeza ukufinyelela kwenethiwekhi kwabasebenzisi abangavamile ezindaweni zasemakhaya ...
Isixazululo se-DCN ISP Access Network
Ukubuka Okungemuva Ngaphansi komncintiswano onamandla wemakethe, imakethe yezinsizakalo ezihlinzeka nge-Intanethi (ISPs) iye yaba ncanyana futhi yancipha (ngokwesibonelo, i-broadband, i-MPLS VPN ne-SMS). Okwamanje, i-Artificial Intelligence (AI), i-Virtual Reality (VR), i-big data analytics, ne-computing yamafu: ...
Isixazululo senethiwekhi yokubhekwa kwe-DCN IP
Izixazululo ze-IP ze-Information Information zisetshenziswa kakhulu kuzo zonke izimboni, njenge: · Imfundo: ukuqapha okukude kwezindawo zokudlala zesikole, amapaseji, amahholo namakilasi, kanye nezinye izakhiwo; · Ezokuthutha: ukuqapha okukude kwesiteshi sesitimela, ithrekhi yesitimela, umgwaqo omkhulu nesikhumulo sezindiza ...
Isixazululo seDCN Data Center
Imininingwane engemuva Ukusetshenziswa okubanzi kwe-computing yamafu, idatha enkulu kanye ne-inthanethi ephathekayo kusheshisa ukwethulwa kwezinsizakalo ezintsha kanye nokwakha ithrafikhi eningi yedatha yedatha. Lokhu kudinga impendulo esheshayo evela kunethiwekhi yedatha yedatha. Isixazululo senethiwekhi yedatha yedatha ye-DCN sinikeza amakhasimende isakhiwo ...